HTC သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင် HTC U12 + ကိုသာစတင်ရောင်းချမည် Androidsis
HTC U12 + သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် HTC ၏တစ်ခုတည်းသောအဆင့်မြင့်ဖြစ်သည်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း HTC U12 + ၏အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်, ထိုင်ဝမ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်။ ဒီပေါက်ကြားမှုတစ်ခုမှအတည်ပြုခဲ့သည်ပေမယ့်ပေမယ့်။ ဒါကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဖုန်းပတ်လည်မှာမသိတဲ့သူများစွာရှိနေသေးတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာကနွေ ဦး ရာသီမှာဖုန်းကစျေးကွက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲအဖြစ်မေလ.
ယခုမူကားနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလာသေး၏။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုနှစ်တွင် high-end device ကိုဈေးကွက်ထဲ၌သာရောင်းချတော့မည်ဟုကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကအွန်လိုင်းမီဒီယာကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ HTC U12 + ကဒီအပိုင်းအတွင်းရှိစတိုးဆိုင်များကိုရောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောဖြစ်လိမ့်မည်.
ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒအပြောင်းအလဲကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစျေးကွက်ထဲမှာ high-end devices နှစ်ခုကိုထုတ်ပေးလို့ပါ။ တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာတစ်နှစ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာသူတို့မူဝါဒအသစ်ကိုလောင်းမယ်၊ ဒါကြောင့် HTC U2018 + မှာမြင့်တဲ့အကွာအဝေးမှာအပေါင်းပါရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကြည့်ရသည်မှာ ကုမ္ပဏီယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးက၎င်း၏ catalog ထဲမှာ devices များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်လိုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သူတို့သည်ဤလျှော့ချရေးနှင့်အတူစတင်အကွာအဝေး၏ထိပ်နှင့်အတူစတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့် high-end အတွင်းမှာပဲကုမ္ပဏီမှစောင့်ဆိုင်းစရာများစွာမရှိပါ။ မေလကဒီဖုန်းနဲ့အဲဒါပါပဲ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, HTC သည် HTC U12 + အတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မှုကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းကိုမေလမှာပြသမှာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဖြန့်ချီမှာပါ။ စျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်သူတို့မျှော်လင့်သည့်နည်းဗျူဟာ။
ယခုအချိန်တွင်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အများကြီးကအကြောင်းလေ့လာသင်ယူခံရဖို့ကျန်ရှိနေပေမယ့်။ ဤ HTC U12 + နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမကြာမီသိရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။2018 ခုနှစ်တွင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်ရှိရန်ကုမ္ပဏီ၏တစ်ခုတည်းသောအထင်ကရဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » HTC U12 + သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် HTC ၏တစ်ခုတည်းသောအဆင့်မြင့်ဖြစ်သည်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် HTC အဖွဲ့များသည်သူတို့၏ထိုင်ဝမ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ASUS ZENFONE အဖွဲ့များသည်အနည်းဆုံးကောင်းမွန်သောအသင်းများဖြစ်သည်၊ ပိုလန်သောဆော့ဖ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သူတို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်စနစ်အသစ် ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အရမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သလား၊ ဒီအပိုင်းကကောင်းမွန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုရှိတယ်၊ အားနည်းချက်က Amoled မျက်နှာပြင်ကအရမ်းနည်းနေတယ်၊ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့အရမ်းကောင်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ထရီတွေဖြစ်တဲ့ Huawei mate 10 pro၊ software ကောင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ဘက်ထရီအပြည့်ရှိတယ်
ညံ့ဖျင်းသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ???? သို့သော် HTC U11 + တွင်အခြားစမတ်ဖုန်းများမရှိသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိလျှင် ??? သင်ဘယ်အကြောင်းပြောနေတာလဲ???
ကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်သော Android Apps များ